ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားမှာပါကွာ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားမှာပါကွာ….
Posted by koyin sithu on Jun 15, 2012 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 17 comments
မင်းတို့ကို ငါ ပုံလေးတစ်ပုံ ပြောပြမယ်။ ဟိုး… ရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ အဲဒီ ဘုရင်ရဲ့ တိုင်းပြည်ကို တစ်ခြား အင်အားကြီးတိုင်းပြည်က ဘုရင်တွေက တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြံစည်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရင်ကြီးဟာ စိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ကွာ။ အဲဒီတော့ သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ ရသေ့ကြီးဆီမှာ အဆောင်ကလေးတစ်ခု သွားပြီးတောင်းတယ်။ သူတောင်းတဲ့အဆောင်က စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံရင်လည်း စိတ်မညစ်ရဘဲ ပြေပျောက်သွားရမယ်တဲ့။ ပျော်စရာနဲ့ ကြုံရင်လည်း အရမ်းမပျော်ဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်သွားရမယ်တဲ့။ အဲဒီလို အစွမ်းထက်တဲ့ အဆောင်လေးတစ်ခု ပေးပါလို့ တောင်းတယ်။
အဲဒီတော့ ရသေ့ကြီးက ကျောက်အနက်ကလေးနဲ့ ကွင်းထားတဲ့ လက်စွပ်ကလေးတစ်ကွင်း လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ လက်မှာ ၀တ်ထားဖို့လည်း မှာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံတဲ့အခါမှာ ဒီလက်စွပ်ကလေးကို စိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့။ ကြည့်တဲ့အခါ ဘာမှတွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမှောင်ရှိတဲ့နေရာမှာ ကြည့်တဲ့။ သိပ်ပြီး ပျော်လာတဲ့အခါမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ လက်စွပ်ကလေးကို ကြည့်ပါတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ ဘုရင်ကြီးဟာ သူလိုချင်တဲ့ အဆောင်လက်စွပ်ကလေး ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ၀မ်းသာသွားတယ်။
အဲဒီလက်စွပ်ကလေးရပြီး သိပ်ပြီး မကြာပါဘူး။ အခြားတိုင်းပြည်ရဲ့ ဘုရင်တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု့ဟာ ပိုပြီး ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက် ဘုရင်ကြီးဟာ အတော့်ကို စိတ်ညစ်သွားတယ်။ တုန်လည်း တုန်လှုပ်သွားရှာတယ်။ အဲဒီတော့ ဘုရင်ကြီးဟာ မှောင်ရိပ်ရှိတဲ့ ကျောက်တောင်ကလေးနားကို တက်သွားပြီး လက်စွပ်ကို စိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ ရသေ့ကြီင်္းက အဲဒီလက်စွပ်ထဲမှာ စာထွင်းပြီးထည့်ထားတာ။ မှောင်ရိပ်ခိုပြီး ဘရင်ကြီးဟာ အဲဒီ ကျောက်နက်ကလေးကို စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျောက်နက်ကလေးထဲက စာကို ကောင်းကောင်း ဖတ်လို့ ရသွားတယ်။ ဖတ်မိတာနဲ့ စိတ်ညစ်တာတွေရော ၊ ထိတ်လန့်တာတွေရော၊ စိုးရိမ်တာတွေ လုံးဝ လွင့်ပျောက်သွားတယ်။
အဲဒီကျောက်နက်လေးထဲက စာက ဘာလဲဆိုတော့… ပြီးသွားမှာပါ ဆိုတဲ့ စာပဲ။ ဆိုလိုတာက စိတ်ညစ်မနေနဲ့ သူ့ဘာသာသူ ပြီးသွားမှာပါတဲ့။ ပုံပြင်ကလေးကတော့ ဒီလောက်ပဲ။ အဲဒိတော့ မောင်ရင်တို့ကို ပြောချင်တာကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးသွားမှာပဲကွာ။ ဘာမှ စိတ်ညစ်မနေနဲ့။
မပြီးခင်စပ်ကြားတော့ တော်တော်နေရခက်ကြရတာ ကလား ။ ကရင်စည် ရဲ့ 
ပြီးသွားပြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ မြို့ ၊ရွာတွေ ကျီးလန့် စာစားတွေဗျာ။
ကလေးမဟုတ်တော့ ပုံပြင်မကြိုက်၊ လက်တွေ့ဆန်တာကိုပဲ ပို၍ကြိုက်၏။
ရှေးရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါး၊ အချင်ကြီးများစားပြီး၊ ဖင်ကြီးကားပြီးသေရောတဲ့၊ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်။
အဲဒီ “ပြီးသွားမှာပါ” ဆိုတာ ကို ကျောက်နက်ထဲ မှာ ထွင်းထား၊ အမှောင်ထဲမှာဖတ်ရ။
ဟား …. ဒါဆိုရင် glow in the dark paint က အဲဒီ ကထဲ က ပေါ်နေခဲ့တာဘဲ။
ဝမ်းနည်းရတာ၊ ဝမ်းသာရတာ အားလုံး က ဘာမှ မမြဲ။
အဲဒါကို မြဲတယ်ထင်နေလို့ ပြသနာ တွေ ဖြစ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ လူတွေကတော့ မမြဲ၊ မကောင်းတဲ့ စနစ်ပျက်ကြီးက မြဲ။
အရီးလတ်ကလည်း… မြန်မာပြည်မှာက စနစ်ပျက်ကြီးက မြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။
စနစ်ပျက်ကြီးကတည်းက လူတွေက မြဲနေသေးလို့ မြဲနေကြဒါဘာ…
ဘာ.. သဂျီးပြောသလို… စနစ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး…
သြော်.. အနိစ္စ.. အနိစ္စ
ဘ၀.. ဘ၀ ဆိုတာ တိုက်ပွဲ…
မိန်းမယူသောသူ ဘွတ်အဲ… ဟီး.. ဘာမှလည်း မဆိုင်ပါလား…
အချိန် တန်တော့လဲ ပြီးသွားမှာပါဘဲ လေ မုန်တိုင်းပြီး၇င်တော့ လေပြေ ညှင်းကလေးတွေဝင်ေ၇ာက်လာပါလိမ်မယ်
“အချိန်ဆိုတာ အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်လက်ပါ” လို့ ဆိုလိုတာပေါ့နော်။
မောင်ပေကတော့ ပြီးသွားတိုင်း ပြီးသွားတိုင်း အဲဒီမတိုင်ခင် တော်တော်နေရခက်ရှာတယ်တဲ့နော်။ သနားလိုက်ထှာအေ..
ပြီးသွားတာတော့ ဟုတ်တာပေါ့ ဗျ..
မပြီးခင် မပြီးမချင်းကတော့ တော်တော် ဆိုးပါကလား …
ပုလဲဆိပ်ကမ်းဗုံးကြဲခံရတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆိပ်ကမ်းကို ဂျပန်လေယာဉ်တွေ ဗုံးကြဲပြီးတော့
အဲးဒီမှာ အရာရှိက စာကတစ်နာရီတည်းနောက်ကျသွားတယ်တဲ့
မပြီးခင် အဲ့၁နာရီမှာ လူတွေတော်တော်သေသွားတယ်
ဒါဆိုရင် မပြီးခင်မှာ အတော်ခံစားကြမယ့် သူတွေအတွက်ကော ဘယ်လိုပြောချင်တာပါလဲ။
အဲဒါလဲ … ပြီးသွားမှာပါ :-)
အမင်းချားပီးရင်တို့ ဘာတို့ပေါ့ ဘဘဗိုက်ရာ…ဟုတ်ဖူးလား…..။
ကျွန်တော်ကတော့ “ပြီးသွားမှာပါ” ဆိုတဲ့ စကားကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက်လို့ဘဲထင်တယ်။